म खाडीको १२ घण्टा ड्युटीमा, श्रीमती अर्कैको अँगालोमा
१९ वर्षको उमेरमा म वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी गएँ। ६ वर्ष जति काम गरेपछि मनले रोजेकी प्रेमिकासँग बिहे गरेँ। हाम्रो छ वर्षदेखि प्रेम थियो। म निकै खुसी थिएँ प्रेम सफल भयो भनेर। खाडीमा कमाएको पैसाले बिज्नेस गरेँ। तर भाग्यले साथ दिएन र फेरि घरमा बूढा आमाबाबा र श्रीमती छोडेर खाडी मुलुक गएँ। खाडीमा काम गर्दागर्दै आमा खसेको खबर पाएर बेहोस भएछु। आमालाई कुनै रोग थिएन। नेपाल आएपछि थाहा पाएँ कि आमाले त आत्माहत्या पो गर्नु भएको रहेछ !
अब आफैँ सोच्नुस्, म माथि कस्तो वज्रपात भयो होला ! पछि नेपालमा आमाको काम सकेर केही दिन गाउँ घुम्दा त यस्तो कुरा थाहा पाएँ कि मलाई अझै पनि पत्याउन गाह्रोे भैरहेको छ।
गाउँलेले सुनाए, ‘तेरी स्वास्नी त अरु कसैसँग लागेको कुरा थाहा पाएर आमा तनावमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आत्माहत्या गर्नु भयो।’
(शुक्रबार साप्ताहिकबाट साभार)